.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း & နန်းသူဇာ – Friend Album
နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း & နန်းသူဇာ – Friend Album
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း & နန်းသူဇာ တို့ဆိုထားတဲ့ Friend Album လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သီချင်းတွေက အားလုံးပေါင်း ၁၅ ပုဒ်တောင်ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ သူငယ်ချင်းတို့ နားထောင်လို့ ၊ ဒေါင်းယူလို့ပါ
အဆင်ပြေအောင် 64kbps နဲ့ ချုံ့ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
1 4/20 (Four-Twenty) နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း၊ နန်းသူဇာ Click Here !! 2.00 MB
2 Blah Blah Blah နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း Click Here !! 1.50 MB
3 Kiss Me Quick နန်းသူဇာ Click Here !! 1.60 MB
4 တစ်နေ့မှာ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း feat. လွှမ်းပိုင် Click Here !! 2.00 MB
5 နင်မရှိတဲ့ကမ္ဘာ နန်းသူဇာ Click Here !! 1.70 MB
6 ရူးသွားပြီ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း Click Here !! 1.40 MB
7 Friend နန်းသူဇာ feat. ကျော်ထွဋ်ဆွေ Click Here !! 1.60 MB
8 ချစ်လွန်းတော့လည်း နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း Click Here !! 1.50 MB
9 မျှော်နေမိတယ် နန်းသူဇာ Click Here !! 1.70 MB
10 အလွမ်းအဆိပ်တက် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း feat. ရဲရင့်အောင် Click Here !! 1.40 MB
11 အဖြူရောင်ကြိုး နန်းသူဇာ Click Here !! 2.00 MB
12 ပိုချစ်မိတယ် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း Click Here !! 1.50 MB
13 အမည်းနဲ့အဖြူ နန်းသူဇာ feat. Nine One Click Here !! 1.40 MB
14 ဟိုတုန်းက နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း Click Here !! 1.50 MB
15 အိပ်မက်လေးလို နန်းသူဇာ Click Here !! 1.30 MB
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ Mp3 သီချင်း ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ (လုံးဝ) ကူးတင်ခွင့်မပြုပါ။
Posted by Thurainlin at 05:33